कोरोना भाइरसः फ्यानहरु नहुने हो भने लेब्रोन जेम्स खेल्न चाहदैनन् – Talking Sports
कोरोना भाइरसका कारण एनबीएमा पनि दर्शक बिना लिग गराउने तयारी थालिएपछि अमेरिकी बास्केटबल स्टार लेब्रोन जेम्सले फ्यानहरुको अनुपस्थितिमा आफू खेल्न नखेल्ने स्पष्ट पारेका छन् ।
एनबिए वेष्टर्न कन्फेरेन्सबाट प्ले अफमा स्थान बनाइसकेको लेब्रोनको लस एन्जलस लेकर्ससँगै एनबिएले लिगका सम्पूर्ण खेलहरु बन्द स्टेडियममा गराउने तयारी गरिरहेको छ । मिल्वाउकी बक्सका ग्रिक खेलाडी यानिस एन्टेन्टोकुप्कोसँगै एनबिएको एमभिपीको दौडमा रहेका लेब्रोन समर्थकहरु नहुने हो भने नखेल्ने मनसायमै छन् ।
“बिना दर्शकको खेल ? म खेल्दिन,” सिजनको उत्कृष्ट भिडन्तमा बक्सलाई हराएपछि लेब्रोनले भने । “खाली स्टेडियममा खेल्नु औचित्य के ? म मेरो टिमका साथीहरूका लागि खेल्छु, फ्यानहरूका लागि खेल्छु र यो सबैलाई थाहा छ । यदि म कोर्टमा पुग्छु र त्यहाँ प्रशंसक नै हुदैनन् भने खेल्दै खेल्दिन,” लेब्रोनले भने ।
एनबीएले उपस्थिति सीमित राख्न फ्रान्चाइजहरुलाई आवश्यक कर्मचारीको नियक्ति गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । सबै तिर यो निर्णयको सही र गलत दुबै टिप्पणी भईरहेको बेला मायामी हिट्स र क्लेभल्याण्ड क्याभिलियर्सबाट पनि स्टार भइसकेका लेब्रोनले भने ।
७ बर्षपछि पहिलो पटक प्ले अफ यात्रा
२०१३ पछि पहिलो पटक लेकर्स प्ले–अफमा स्थान बनाउन सफल भएको छ । यस क्रममा लेकर्सले बक्सलाई ११३–१०३ ले हराएको हो । लेब्रोनले लेकर्सका लागि ३७ अंकको साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका थिए । यानिसले बक्सका लागि ३२ अंक जोडेका थिए । दुई स्टार खेलाडीको भिडन्तमा लेब्रोनले ८ रिबाउण्ड र सात असिस्ट पनि गरेका थिए । यानिसको नाममा ११ रिबाउण्ड र ७ असिस्ट रहेको थियो ।
लेकर्सको जितमा फरवार्ड एन्थोनी डेभिसले पनि स्ट्यापल्स सेन्टरमा ३० अंक जोड्न सफल भए । पहिलो हाफमा दुवै टोलीले समान ४८ अंक जोडेपछि लेकर्सले उत्कृष्ट खेल देखाउदै १८ अंकको अग्रता बनाएको थियो ।
डिफेन्डिङ्ग च्याम्पियन टोरन्टो र्याप्टर्र्सले पनि इस्टर्न कन्फ्रेन्सबाट प्ले अफमा स्थान बनाएको छ । पछिल्लो पटक लेकर्स प्ले–अफमा हुँदा पहिलो चरणमा सान एन्टोनियो स्पर्सले ४–० ले हराएको थियो । १६ पटकको एनबीए च्याम्पियन रहेको लेकर्सले त्यसपछिका वर्षहरूमा धेरै संघर्ष गरेको छ ।
तीन उपाधी जितेका लेब्रोन लेकर्समा आए पछि पनि लेकर्स गत सिजन पनि पराजित भएको थियो । न्यु ओर्लिन्स पेलिकन्सबाट डेभिस एलए आएपछि लेकर्स यो सिजन लिगको सबैभन्दा प्रभावशाली टिममध्ये एक हुन पुगेको छ । लेकर्स २०१० पछि आफ्नो पहिलो उपाधि जित्न चाहन्छ ।